विश्वकप क्रिकेट लिग २ को शनिवार त्रिवि मैदान कीर्तिपुरमा भएको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई ३५ रनले पराजित गरेको छ।
आइसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग टु अन्तर्गत ओमानविरुद्धको खेलमा नेपालले १ सय ९८ रनको लक्ष्य पाएको छ ।
‘वीर गणेशमान सिंह एडिडास १० किमि रोड रेस’ प्रतियोगिता हुँदै
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रणेता स्व. गणेशमान सिंहको स्मृतिमा ‘वीर गणेशमान सिंह एडिडास १० किलोमिटर रोड रेस प्रतियोगिता’ हुने भएको छ । रुटस फेसन प्रालिले आगामी फागुण २४ गते शनिबारका दिन सो प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो । मंगलबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रालिका प्रबन्धनिर्देशक सञ्जिब तुलाधरले प्रतियोगिता एडिडास शोरुम दरबारमार्गबाट सुरु भई
विश्व वरियतामा नेपाल यथावत्
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)को टी–ट्वान्टी विश्व बरियतामा नेपाल यथावत् स्थानमा रहेको छ ।
विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घले आज सार्वजनिक गरेको विश्व वरियतामा नेपालका युवा ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स दाहाल १४ औँ स्थानमा पुगेका छन् । जुनियरतर्फको विश्व वरियतामा १८ औँ स्थानमा सुधार गर्दै प्रिन्स १४ औँ स्थानमा पुगेका हुन । प्रिन्सले प्राप्त गरेको उक्त वरियता नेपाली खेलाडीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको उच्च हो । यसअघि उनी विश्व वरियताको ३२ औँ स्थानमा थिए ।
सानै उमेरमा चर्चित
जिया कार्की अहिले १४ वर्षकी भइन् । यो उमेरमा नै जिया कराँतेमा राष्ट्रिय च्याम्पियन बनिसकेकी छन् । गत वैशाखमा भएको आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा महिला ४२ केजी कुमुतेतर्फ स्वर्ण पदक जितेपछि जियाको चर्चा निकै भयो । राष्ट्रिय खेलकुद नेपालको सबभन्दा ठूलो खेलकुद प्रतियोगिता हो । जहाँ नेपालका उत्कृष्ट खेलाडीको जमघट रहने गर्दछ । त्यस्तो प्रतियोगितामा कम उमेरकी जियाले स्वर्ण जित्छ भन्ने कसले सोचेको होला र । जियाको सोचाई भने फरक थियो, जित्छु भन्ने ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको चौथो चरणका खेल सकिँदासम्म मनाङ मर्याङ्दी क्लब शीर्ष स्थानमा छ । चार खेलमा तीनमा जीत तथा एक खेल बराबरी खेल्दै मनाङ १० अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको हो । तेस्रो चरण सकिँदासम्म शत प्रतिशत नतिजा निकालेको मनाङ चौथो चरणमा फ्रेन्डस् क्बलसित १–१ को बराबरी खेल्न पुगेको थियो । तीन खेलमा जीत तथा एकमा बराबरी खलेको मछिन्द्र क्लब दोस्रो स्थानमा छ ।
फुटबल–जाउलाखेलद्वारा च्यासल पराजित
शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा जावलाखेल युथ क्लबले च्यासल युथ क्लबलाई पराजित गर्दै विजयी भएको छ ।
सन्तोषी एकाएक कीर्तिमानधारी
एथलेटिक्स खेलै पुरानो  । यसलाई ‘फादर अफ स्पोर्ट्स’ मानिन्छ  । यही एथलेटिक्समा सन्तोषी श्रेष्ठले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा स्वर्णपदक जितेर इतिहास रचेकी छन् । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा उनी एथलेटिक्समा नेपालका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण जित्ने महिला खेलाडी भएकी हुन् । सन्तोषीले १० हजार मिटर दौडमा त्यो सफलता हासिल गरेकी हुन् । उनले एक मिलिसेकेन्डले मात्र भारतीय प्रतिद्वन्द्वी कविता यादवलाई पछाडि पारिन् ।
नेपाली सेनाले प्रधानसेनापति आमन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
२०७६ मंसिर ३
कतारमा सन् २०२२ मा आयोजना हुने फिफा विश्वकपको दोस्रो चरण छनोटअन्तर्गत आज भएको पाँचौँ खेलमा नेपाल कुवेतसँग पराजित भएको छ ।
दश लाख लागतमा धनुषामा प्रदेशस्तरीय कराते प्रतियोगिता हुँदै
धनुषा जिल्लाको मिथिला बिहारी नगरपालिका हुने महावीर झण्डासँगै प्रदेशस्तरीय कराते प्रतियोगिता हुने भएको छ । नेपाल क्योकुशिन कान कराते संघ प्रदेश नं. २ को आयोजनामा सोमबारदेखि सुरु हुने तीन दिवसीय प्रदेशस्तरीय कन्ट्याक कराते प्रतियोगितामा प्रदेशभरिका दुई सय छ जना खेलाडीहरुको सहभागिता रहने संघका प्रदेश अध्यक्ष बैजनाथ यादवले जानकारी दिए ।
मित्रराष्ट्र चीनको उहानमा जारी सातौं विश्व सैनिक गृष्मकालीन खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाली सेनाकी तुलसा खत्रीद्वारा राष्ट्रिय किर्तिमान
मित्रराष्ट्र चीनको उहानमा संचालन भईरहेको सातौं विश्व सैनिक गृष्मकालीन खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाली सेनाकी तुलसा खत्रीले मिति २०७६ कार्तिक ५ गते संचालन भएको महिलातर्फको ४०० मिटर दौडमा राष्ट्रिय किर्तिमान राख्‍न सफल भएकी छन् । उनले उक्त दुरी ५९. ५७ सकेण्डमा पुरा गरी यस अघिको ५९.९० सकेण्डको राष्ट्रिय रेकर्ड तोडेकी हुन् । तुलसा खत्रीले ९ वर्ष अगाडी सन् २०१० प्रमिला रिजालले राखेको रेकर्ड तोडेको हो । उक्त दौडमा २१ देशका प्रतिस्पर्धीले भाग लिएका थिए । यसै गरी ५ गते संचालन भएको महिलातर्फको १०० मिटर दौडमा नेपाली सेनाकी सरस्वती चौधरीले १२. ६६ सकेण्डमा उक्त दुरी पुरा गरी आफ्नो व्यक्तिगत रेकर्डमा सुधार गरेकी छन् ।
सातौँ विश्व सैनिक गृष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिता मा सहभागी राष्ट्रको आज यहाँ झण्डोत्तोलन भएको छ । इन्टरनेशनल मिलिटरी स्पोर्टस् काउन्सिल (सिआइएसएम) ले प्रत्येक चार वर्षमा गर्ने यो प्रतियोगितामा नेपाली सेनाले पहिलोपटक भाग लिएको छ । महासेनानी शशिकिरण रायमाझीको नेतृत्वमा नेपाली खेलाडी झण्डोत्तोलन
नेपाल क्रिकेट: कप्तान पारस खड्काको अप्रत्याशित राजीनामा
नेपाली क्रिकेटको उपलब्धि र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा सारथि बनेका पारस खड्काले राष्ट्रिय टोलीको कप्तानबाट राजीनामा दिएका छन्।
पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता
जीतबहादुर केसी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रथम पटक पदक दिलाउने खेलाडी हुन् । उनको जन्म २००५ भदौ ४ दोलखा जिल्लाको चरीकोट पोगटीमा भएको हो । गरीब किसान परिवारमा जन्मिएका केसीको पिता बिर्खबहादुर र माता वन्दना हो । केसीका एक दाजु र दुई दिदीसहितको मध्यम परिवार थियो । पहाडका कान्लाहरू उक्लिँदै–ओर्लिंदै बालापन बिताए उनले ।